Falanqaynta Kulanka Leicester City Vs Arsenal, Gunners Oo Kulankan Loo Cabsi Qabo
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Leicester City Vs Arsenal, Gunners oo kulankan loo Cabsi Qabo
Marka loo eego tayada kooxda Leicester City ee kulamadii ugu danbeeyay iyo halka ay horyaalka kaga jirto ayaa loogu badinayaa kooxda Arsenal in kulankan guul daro kala kulmi karto Kooxda ku magac dheer Dawacooyinka ayaana gurigeeda marti loogu yahay inkastoo wax walbo laga filan karo.
Saacada 15:00 pm Waqtiga Somaliya
Garoonka King Power Stadium
Leicester City:- Leicester waxaa ka maqnaan doona James Maddison, kaasoo seegay guul darradii Europa League ee khamiistii dhibaato miskaha ah.
Kelechi Iheanacho, oo ganaax ku maqnaa kulankaas, ayaa diyaar ah laakiin Ayoze Perez, Wesley Fofana, Wes Morgan, James Justin iyo Dennis Praet ayaa weli maqan.
Arsenal:- Arsenal ayaa isha ku heysa Rob Holding, kaasoo seegay kulankii bartamihii isbuuca ay ka badiyeen Benfica sababo la xiriira borotokoolkiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Thomas Partey ayaa ku soo bilaaban kara ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac uu badal ku soo galay kulankaas.
Leicester ayaa badisay seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka, oo ay ku jirto guushii 1-0 ee ay ku gaareen Emirates bishii October ee la soo dhaafay.
Dawacooyinka ayaa laga yaabaa inay horyaalka ka laba jibaaraan Arsenal markii ugu horeysay tan iyo 1973-74.
Arsenal ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay marti ahaayeen Leicester.
Bukayo Saka, oo ah 19 jir, wuxuu noqon karaa ciyaartoygii labaad ee ugu da’da yaraa ee gaara 50 kulan oo Premier League ah oo Arsenal ah, ka dib Cesc Fabregas.
Previous articleBarcelona oo guul ka gaartay Kooxda Sevilla Xili Lionel Messi uu Shabaqa soo taabtay
Next articleFalanqaynta Kulanka Villarreal Vs Atletico Madrid ee Horyaalka La Liga Spain